Flavor: Honey ruomba
Popcorn uye huchi ruomba zvakagadzirwa kune mumwe nemumwe. Iyo inonaka kuravira kwechibage inorumbidza kupfuma kweukrimu hwehuta, uye kubata kwouchi kunogadzira zvese zvinwiwa.
1.Sarudzo dzakasarudzika zvigadzirwa Indiam Popcorn inogadzirwa kubva kunze kwehowa chibage, mhando yepamusoro yemaltose manyuchi uye inounzwa premium caramel yekuona yakasikwa uye inotapira kuravira.
2.Healthy Kutsvaga Isu tinoshandisa echisikigo oiri yemichindwe tsanga dzakatorwa kubva kune yakaderera-mafuta, yakaderera-koriori mafuta emiriwo kuti uve nechokwadi chehutano hwezvigadzirwa zvedu.
4.Unique tekinoroji Indian popcorn yakafambira mberi otomatiki yekugadzira mutsara, ichishandisa mwenje kugocha kwazvino tekinoroji, iko kuwedzera kuri chaizvo, bhora rakatenderera uye rizere, slagging zvachose
5: Kuti ive nechokwadi chekuwedzera uye kuzara kwepopcorn, yakasikwa inotapira, kambani yedu yakagadzira yakasarudzika yemaminetsi gumi nemasere ekubheka tekinoroji (uye yakazivisa patent yenyika), kuitira kuti popcorn ifuridzire chaizvo, shuga zvakaenzana kupinda, crisp, kunozorodza, munhuwi,
gadzira popcorn mhando kuravira kubva pane zvakajairwa
Makapu Anoputira: 3 x 33 × 34 (cm)
Nekuti popcorn iri nyore kukanganiswa nehunyoro, icharasikirwa nekrisimasi uye inonaka kuravira kutsva mushure mekukanganiswa nehunyoro, saka popcorn haisi nyore kuchengeta kwenguva yakareba, saka inofanira kudyiwa nyowani. Kana iwe uchida kuzvichengeta, zvichengete munzvimbo inemhepo uye yakaoma nzvimbo kudzivirira hunyoro.
Popcorn imhando yechikafu chakazvitutumadza icho chaivapo munguva dzekare. Mazana emakore apfuura, mitsipa yaive nemakaro. Vasati vabva kuEurope vatamira kune ino "nyika nyowani", maIndia aigara mukondinendi iyi vaive mukariro yekudya maputi.
Mushure mekudzokera kuEurope, Columbus akamborondedzera kuvanhu chiitiko chakajeka chevana vechiIndia mu "nyika nyowani" vachitengesa mumugwagwa nezvipopora zvemumaoko. Ndiwo maIndia akadzidzisa vatsva vekuEurope nzira dzekudyara nekubika chibage.
Pashure: Kirimu Yakashatirwa INDIAM Popcorn 118g
Zvadaro: Takura Sesame Popcorn mumabhegi
INDIAM popcorn, Caramel popcorn, China Yakagadzirirwa Classroom, popcorn,